Nhau - Ko Mafuta Asina Oiri Anonyatsoda Hapana Mafuta Ekuzora?
Ko Mafuta Asina Mafuta Haatombodi Mafuta ekuzora?
Ko Mafuta Asina Mafuta Haatombodi Mafuta ekuzora here?
Oiri-isina mabheyari mhando nyowani yema lubricated mabhegi, ane hunhu hwesimbi mabheyari uye asina-mafuta mabheyari. Inotakurwa nesimbi matrix uye yakazadzwa neakasarudzika solid solid lubricating zvinhu.
Iine hunhu hweakakwira kutakura kugona, kukanganisa kusagadzikana, yakasimba tembiricha kuramba uye yakasimba kuzvidzora-kugona kugona. Inonyanya kukodzera nguva apo zvinonetsa kuzora mafuta uye kugadzira mafirimu emafuta, akadai seanorema mutoro, yakaderera kumhanya, kudzosera kana kuzungunusa, uye haatyi kutya ngura yemvura uye imwe ngura yeacid.
Inoshandiswa zvakanyanya mune metallurgia inoenderera ichikanda michina, simbi kutenderera michina, kuchera michini, ngarava, hwemhepo turbines, hydraulic turbines, jekiseni kuumbwa michina nemidziyo yekugadzira mitsara.
Mafuta-asina kubereka zvinoreva kuti kubereka kunogona kushanda zvakajairika pasina mafuta kana mashoma mafuta, pane kusakwana zvachose isina mafuta.
Zvakanakira mabhureki asina mafuta
Kuti uderedze kupesana kwemukati uye kupfeka kweakawanda mabheingi uye kudzivirira kupisa uye kunamatira, mafuta ekuzora anofanirwa kuwedzerwa kuve nechokwadi chekushanda kwakatsiga uye kwakavimbika kwemabheya ekuwedzera hupenyu hwekuneta hwemabheyi;
Bvisa kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunokonzerwa nekudonha;
Inokodzera mutoro unorema, yakaderera kumhanya, kudzosera kana kusvetuka nguva uko kunonetsa kuzodza nekugadzira mafirimu emafuta;
Izvo zvakare hazvityi kukora kwemvura uye imwe ngura yeacid;
Yakashongedzwa mabheyaringi kwete chete kunze kwemafuta uye simba, asi zvakare ihwo hwakareba hupenyu hwehupenyu kupfuura zvakajairika kutsvedza mabheyari.
Chengetedzo yekuisa isina mafuta-inotakura
Iko kuiswa kweasina mafuta-kutakura kwakafanana nemamwe mabheyari, zvimwe zvinoda kucherechedzwa:
(1) Sarudza kana paine bulges, protrusions, nezvimwewo pamusoro pekukwirana kwepamusoro pe shaft uye shaft shell.
(2) Kunyangwe paine guruva kana jecha pamusoro pekutakura dzimba.
(3) Kunyangwe paine kukwenya kudiki, protrusions, nezvimwe, zvinofanirwa kubviswa nefuta emafuta kana yakanaka sandpaper.
(4) Kuti tidzivise kubonderana panguva yekukwirisa, hushoma hwemafuta ekuzora huchawedzerwa pamusoro penzvimbo yegodo nemubato.
(5) Hukukutu hwemafuta-husina kubereka nekuda kwekupisa hakufanire kupfuura madigiri zana.
(6) Iyo yekuchengetedza uye yekuisa chisimbiso ndiro yemafuta-isina kubereka haizomanikidzwa.
Post nguva: Aug-22-2020